बिना दर्ता - भिडियो च्याट №1 - भिडियो संग डेटिंग बालिका अनलाइन
लागि भारत, भारतीय प्रेम छ देशमा को बालिका
मानिसहरू पिउन, महिला र बच्चाहरु पिटे, र धेरै मर्छन् । यो देशको जीवन समाप्त भएको छ । अब देशको बालिका लिएर छन् आफ्नो भाग्य र आफ्नो ठाँउ मा दुनिया मा आफ्नै हात । दैनिक दिनचर्या को एक भारतीय केटी सामान्यतया यो जस्तो देखिन्छ: त्यो जान्छ गर्न, स्कूल आउँछ, घर मा काम गर्दछ, गृह वा सफा देखिन्छ, पछि उनको भाइबहिनीहरूको गर्छ, उनको गृहकार्य, र जान्छ ओछ्यानमा । किनभने यो स्पष्ट छ कि महिला मान्नु पर्छ मानिसहरू । दुर्व्यवहार र हिंसा, बारम्बार हुन्छन् र केटीहरु कारण मर्न बेवास्ता किनभने तिनीहरूले कम छलफल जवान छ । इन्डियाना जस्तै एक सामान्य गाउँ बाट बाहिर, भन्नुभयो हाम्रो सम्वाददातायो एकदम पृथक - बढी खतरनाक छ हाम्रो लागि. बनाउँछ के यो देश त विशेष छ कि बालिका उमेर समूह, वर्ष वर्ष देखि सँगै प्राप्त र आफ्नो समस्या साथ समस्या समाधान को सम्पूर्ण देश. र तिनीहरूले ख्याल समाधान । कि केहि अस्तित्व कहिल्यै । बालिका क्लब देख्नुहुन्छ कि यो गाउँमा छैन, कुकुर, यो के. किनभने भारतीय प्रेम छ एक ठूलो समस्या छ: प्रतिशत मामला, यो ठाउँ को उच्चतम नम्बर. धेरै मानिसहरू मृत्यु को एक परिणाम रूपमा दुर्घटना वा मतवालापन. तिनीहरूलाई अधिकांश पिउने सुरु किनभने तिनीहरूले आफ्नो जब हराएको. रूपमा चाँडै तपाईं कमाउन केहि दिन, पैसा को लागि दूर रक्सी वा सम्पर्क गर्न आफ्नो परिवार वित्त आफ्नो लत । साँझ मा, म सडकमा हिंड्न संग पुरुष र.
र पनि, घरमा दुःख कि एक केटी जब उनको बुबा मातेको छ । घरेलु हिंसा एक साधारण घटना छ । पहिलो, बालिका देखि गाउँ, राज्य, यो बचाव सेवाहरू वरिपरि फर्केर, र केही बिंदु कुराहरू आफ्नै तरिका गए.
पहिलो चरण: लागि: हेरविचार किनभने, अन्यथा प्रकाश शाब्दिक बाहिर जान्छ"घडी गाउँका". तिनीहरूले पनि गरे हेरविचार को पुस्तकालय छ । अर्को ठूलो परियोजना मा पहिले नै छ एजेन्डा: बालिका सुनिश्चित गर्न चाहनुहुन्छ कि आफ्नो गाउँ जोडिएको छ बस नेटवर्क । छोटो मा, मान्छे को लागि जो हुर्कनुभएको, शहर मा यो आवाज प्राकृतिक, लागि भारतीय बालिका, प्रेम छ, एक ठूलो कुरा हो । तर, मात्र छैन, सैन्य विषयहरूमा छलफल थिए मा क्लब सभाहरू. कामुकता पनि एक ठूलो मुद्दा छ कि अझै पनि प्रतिबन्ध लगाइएको भारत । को समर्थन संग बालिका क्लब, बालिका मदत वित्त संग जोडने. तिनीहरूले पनि जान विद्यालय भनेर मानिसहरूलाई बताउन बच्चा विवाह अवैध हो वा बालिका कुनै भन्न सक्दैन जब नातेदार छ सेक्स ।.
एक रूसी मान्छे विवाह गर्न, एक फिलीपींस
त्यहाँ थियो एक सरल सेन्ट पीटर्सबर्ग मान्छे, जो को धेरै प्यारो गर्ने थियो यात्रा र महिला, र माध्यम स्थापित इन्टरनेट मा व्यापार मौका थियो दिन मनपर्ने गतिविधिमायात्रा भएको मा धेरै मात्रमा दक्षिण-पूर्व एशिया, उहाँले केही महिना लेट मा फिलिपीन द्वीप को, शहर । नयाँ पाउन मित्र यो शहर मा उहाँले थियो गाह्रो छैन, र पछि एक छोटो समय, उहाँले थियो बाहिर मा मुख्य सडकमा, र कौसी थियो धोए महिला विकास मायालु हात टी-शर्ट र शर्ट्स । तर आफ्नो कुराकानी उहाँले शायद बताउनुभयो को नयाँ परिचितों आफ्नो देखि, ओठ, म झन् सुनेका केही कि काम रूपमा, एक मा एक भाडामा अपार्टमेन्ट. केही समय पछि, हामी बल्ल मौका थियो उनको पूरा गर्न छ । थियो, धेरै प्यारा साधारण हँसिला, फिलीपींस कि गाउँछन् कराओके, बोल्छ, अंग्रेजी राम्रो छ, कुनै खराब बानी र सामान्यतया माथि ल्याए गरेर सबै को क्याथोलिक चर्च परिवार देखि पिडमोन्ट क्षेत्रहरु । प्रकारको काम फिलिपीन, र अक्सर एक प्रकारको मुस्कान, भन्नुभयो:"तपाईं ओह विवाह गर्न."प्रतिक्रिया, हामी पनि मुस्कुराइन् र). कुल मा, बीस-छवटा जुलाई, म, एक बिट भारी देखि सदिश र गति को विकास घटनाहरू, साक्षी छ यो सबैभन्दा रूसी-फिलिपीन टीकाटालो भयो, जो मा पहाड गाउँ, जहाँ म देखि आए.
परम्परा उपकृत दुलहा आउन सोध्न हात दुलहीको संग आफ्नो भोजन छ । को मामला मा थियो खुवाउन सारा गाउँ, बारे एक सय मान्छे । यी दुई नवैरो बेसिन पास्ता र भात, तलना को एक बाल्टिन, चिकन खुट्टा, पकाएको केही र सस.
धुवाँ थियो एक जुवा लागि पाँच घन्टा, वातानुकूलन स्वीकार गर्न इन्कार गरे यस्तो वास्तविकता) सबै रात काम, त्यसपछि बिहान तान्नुभयो बैग देखि बजार, र साँच्चै स्नायु थियो र चिन्तित को हव्वालाई मा, यो घटना यति मिठो सुतेको पतन दिउँसो को धूपदान वर्तमान तपाईं संग आशा, यो केटी संग एक हार्ड जीवन हो । त्यो जीवन मा एक बांस हट बिना बिजुली र पानी संग काम, छोराछोरीलाई धेरै पटक एक हप्ता मा मिसनरी छोराछोरीलाई, मा सुत्न प्रेम र बलियो बियर । प्रदान अमूल्य सहयोग मा यो सबै कार्य - यो सल्लाह छ सामना गर्न कसरी थियो, तयारी पूरा गर्न उनको आमाबाबुले, किनेको उत्पादनहरु, राखएको -महाराज, संगठित भ्यान, र त्यो थियो संग परिवार को दुल्हन छ । घडी फेंकता एक बेसिन को पकाएको खाना र एक बक्स रोम (एल) मा भ्यान, मा कदम गर्न यो गाउँमा । अब यो बस हेडफोन संग मेरो कान मा, बस केही घण्टा यो हुनेछ एक वास्तविक नायक). बाटो साथ बालिका छलफल गर्ने जो मा शहर जीवित पूर्व-प्रेमी, प्रयास समर्थन गर्न.
निस्सन्देह, उहाँले डर छैन, तर अझै पनि कुनै तरिका डरावना).
पछि घन्टा को एक जोडी हुनेछ सोध्न लागि यो हात को अगाडि सम्पूर्ण गाउँ, र त्यसपछि सौदा गर्न को लागि एक प्रकारको को के भने, आमाबाबु इन्कार गर्छन् । (व्यवस्था द्वारा भने, यो केटी आमाबाबुले छन्, अठार र बीस-पाँच वर्ष उनको मङ्गेतर, आफ्नो विवाह दर्ता छैन). त्यतिन्जेल, प्रयास आराम गर्न. खैर, जब त्यहाँ छ, छैन शब्दहरू, यो राख्न महत्त्वपूर्ण छ. सही स्वरको आरोह अवरोह) सुरु भएको छ । आमाबाबु हो, धेरै काल र केंद्रित । तिनीहरूले बुझ्न सक्छौं लिजा घोषणा आफ्नो मनसाय विवाह गर्न मा बस केही दिन पहिले । म यो बुझ्न रूपमा, एक मानक एल्गोरिथ्म मा पहिलो त्यो आउँछ आमा र बुबा, एक दिन वा दुई प्रशंसा आफ्नो चुनिएको, त्यसपछि दुलहा मा आइपुग्छ आमाबाबुको घर । वृद्ध पुस्ता मा देखिन्छ, यो प्रश्नहरू सोध्छन् र एक निर्णय बनाउँछ गर्न एक विवाह वा छैन । को सहयोग संग एक अनुवादक, आमाबाबुले भन्नुभयो, गम्भीर भने को इरादा र सफा आफ्नो विचार. खुसीको कुरा, दुलहा, यो प्रश्न मात्र थियो).
सबै थिए प्रतीक्षा को लागि एक प्रतिक्रिया छ । पछि वाहवाही, थरथर कामिरहेको हात राखे सगाई घन्टी, यो बालिका संग आनन्द, फेरि, वातावरण भए बढी आराम । एक सानो.
म धेरै सुनेका कथाहरू बारेमा कसरी एशियाली केटी नस्ल सेतो मान्छे को लागि पैसा को सबै चरणहरु मा सम्बन्ध छ । मा आउन -ई मिति संग एक रेस्टुरेन्ट मा एक भीड को नातेदार र सम्झना छैन एक मेनु वस्तु, चोरी गर्न एक सानो बिट को पैसा मा कस्मेटिक्स वा बिरामी भाइ, खोज्न घर संग कार लागि एक विवाह यी कथाहरू को पूर्ण. पहिलो चरण बाहिर गए, एक मित्र संग तर कारण उनको खुवाउन निःशुल्क त्यसपछि, किनभने मेरो पालनपोषण छ । निर्णय छैन पहिले विवाह गर्न एक्लै एक मानिस । सबै सोच कसरी त्यो बनाउन सुझाव, तिनीहरूले भने कहिल्यै सँगै । के निपुण गर्न सुझाव के यो समयमा उडान -) मा आफ्नो को परम्परा मा बताए सामान्यतया फिलिपिन्समा दुलहा खटाइएको छ तीन मुख्य जिम्मेवारी: खुवाउन र पानी सबै समयमा सगाई, किन्न घन्टी र विवाह लागि तिर्न छ (यदि संलग्नताको आशा थियो लगभग एक सय मान्छे, विवाह हुनेछ -) त्यो गरे एक लामो भाषण मा फिलिपिनो, अर्थ थियो जो लगभग निम्नानुसार:"मित्र, भावि पति र पनि युरोपेली, तर एक करोडपति, हामीलाई एक मानव जातिको रूपमा गणना विवाह, मान्छे उहाँले धेरै राम्रो छ. र, शायद, लिन छैन फिरौती लागि दुल्हन छ ।"प्रयास गर्न सुन्न, तर केही बुझ्न सक्छ) छ । तर, धेरै स्पष्ट सुने"किलो मासु र दुई तला मा एक थुक्नु सुँगुर"छ । त्यसपछि हामी बुझे पूर्ण मात्रा को विपत्ति र थाले, धेरै तेजी गर्न यो छलफल मा रूसी.
दुलहा तयार थियो सुरु गर्न बातचीत, तर हामी सिर्फ बताउनुभयो दुई सय किलो को चयन पोर्क मासु, र दुई पुरा जंगली मा एक सय किलो लागि, मूल्य कम छ, तीन पटक र ढुक्क थियो) आमाबाबुले जिद्दी भनेर विवाह गरे ठाँउ मा आफ्नो क्षेत्र, र.
सारा संगठन तिनीहरूले संग गरे आवश्यक समय तिर्न क्यास, साथै तयार गर्न सबै कागजात (अर्थमा को अग्रिम मा साइन इन गर्न नगरपालिका. तिनीहरूलाई लागि, टिकट, पासपोर्ट मा केही मतलब, यो महत्त्वपूर्ण कुरा, विवाह नै) छ । मा चर्चा को विवरण संलग्न मित्र र नातेदार । स्पष्ट छ, ती जो हुनेछ निवेदन साथ तयारी छ । मलाई मिल्यो अन्तर्गत को दर्जनौं आँखा तिनीहरूले मलाई लिएर शब्द बनाउन निम्तो र उपहार लागि अतिथि), सुनेर यो आंकडा, र गोप्य मलाई भन्नुभयो कि पैसा को लागि तयार प्राप्त गर्न विवाहित कम्तिमा हरेक महिना) को वातावरण मा कोठा परिवर्तन गर्न एक आराम, मान्छे गर्न थाले, मजाक हाँस्न र खुसी हुन लागि र उनको आमाबाबुले. को दैवत्वारोपण यी जमघट थियो अनुरोध गर्न अनुमति आमाबाबुले देखि. पहिलो संग हात आफन्तबाटै ठगिएँ, आमाबाबु र त्यसपछि ल्याए आफ्नो हात आफ्नो निधारमा । प्रतिक्रिया स्पष्ट थियो, के तिनीहरूले आशा थिएन यस्तो शुद्ध फिलिपिनो इशारा छ । जबकि म चलिरहेको थियो, म क्लिक सटर, र खाना । मा एक ठूलो परिवार क्लिक आवश्यक छैन) मिल्यो संग पास्ता ससेज मा कन्टेनर) मा फिलिपिनो परम्परा आशीर्वाद सगाई, गाउँमा एल्डरहरूले छनौट कप बाहिर भाले को भर्जिन राखिएको, यो मा दुलहीको पायजामा, भट्ठा घाँटी र पिउन न्यानो रगत) मजाक. त्यसपछि एक मानिस पिउने रम र पूर्ण पागल को दिन जो एक प्रभाव यस्तै एक छ । सुन्दर. जब म उहाँलाई देखे एक उज्यालो मा, पहिले नै सुरु) थियो को प्राण) को बीचमा कुरा भयो संग कराओके, जो पछि सबैभन्दा सक्रिय भन्दा अर्को मनपर्ने फिलिपिनो सोख बास्केटबल खेल पनि आनन्द संग समय खर्च आफ्नो भावि पत्नी अब तिनीहरूले गर्न सक्छन् मा पकड ह्यान्डल र मा मान्छे, र एक्लै हुन) र र पर्खेको साँझ भर थिएन उसलाई बाहिर आफ्नो बुझ्दा ह्यान्डल कहीं. मा धूम्रपान कोठा थियो शक्ति द्वारा). त्यसपछि जवान मानिसहरू गए कुराकानी गर्न नातेदार, र म थियो संग बालिका र केटाहरू मा बास्केटबल कोर्ट । त्यहाँ थियो एक बियर को धेरै, कथाहरू बारे स्थानीय परम्पराहरूको, को एक पापी, एक धार्मिक बहस संग दोकान मालिक र को प्रकटीकरण को रहस्य पक्रने जंगली केकडे छ । घर आमाबाबुले पर्याप्त ठूलो छ संग तुलना छिमेकी, बारे पचास वर्गहरूको छ । काठ फर्श, बाह्य पर्खाल बनेको ब्लक, आन्तरिक पर्खाल को बांस, बहिरा छैन. यो घर एक जीवित कोठा र दुई बेडरूम । बेडरूम, को पाठ्यक्रम, यो छ छैन, दुई नजिकको"कोठा", यो को आकार निर्धारित छ जो ओछ्यानमा कम्बल राखे तल्ला मा छ । यहाँ एक"हार्ड"रात थियो, सेन्ट पीटर्सबर्ग मा सरल मान्छे, तर यो हतियार आफ्नो भविष्य पत्नी-सौन्दर्य, जो (. छ) पहिलो पटक यहाँ मेरो जीवन मा चूमा) गर्दा हामी तयारी गर्दै थिए, नास्ता थियो निरन्तर भन्दै कसरी उहाँले खुशी सबै भयो रूपमा यस्तो कुनै त्यहाँ थियो केरकार, आमाबाबुले छैन अंग्रेजी बोल्न, लागत को विवाह सजिलो हुन सक्छ पुल दिनुभयो चुम्बन, अरू के आवश्यक छ लागि आनन्द) को समय मा प्रकाशन को पोस्ट गाउँमा गए संग साइन इन गर्न. सबै, कुनै फिर्ता बदल, किनभने फिलिपिन्समा, सम्बन्धविच्छेद असम्भव थियो). हो, त्यो निर्णय गर्न आफ्नो जीवनशैली परिवर्तन गर्न आवश्यक छ केही साहस. तर फिलिपीन महिला राम्रो हो पत्नीहरू, परिवार उन्मुख, त्यसैले लागि म चिन्तित छैन छु), उहाँले योजना छ छ महिना मा सेन्ट पीटर्सबर्ग, छ महिना मा फिलिपिन्समा, र त्यसपछि यो जान्छ कसरी छ । विवाह पछि, अन्तिम शब्द मात्र लागि मेरो पति) म फिलिपिनो त्यहाँ मित्र मा नै कथा, मेरो कुकुर छ, अधिक विकसित छ भन्दा, छैन परिवार-उन्मुख, मा केन्द्रित सेक्स लागि पैसा । धेरै निष्कपट छ । यस्तो कथाहरू धेरै छ, तर मान्छे छन्, विभिन्न शिक्षा पनि छ । एक स्पष्ट चित्र को एक राष्ट्र संग यस्तो उदाहरणहरु), को नायक, को पाठ्यक्रम, आनन्द । बस कसरी यस्तो जीवन थियो छैन एक बोझ, र संग जीवित एक फिलिपिनो केटी मा पत्रुस पनि, कि, उनको मातृभूमि, यो विभिन्न हुनेछ, यहाँ । तापनि, पाठ्यक्रम, सबैलाई विभिन्न छ । यो हेर्न रोचक हुनेछ यो कसरी विकसित भएको छ वर्ष माध्यम. मेरो अनुभव मा, को लागि आनन्द को औसत, यो पर्याप्त छ गर्न एक पति, स्टोभ, कराओके, एक फोन को लागि खोल्नको, बेसिन संग पाउडर र छोराछोरीलाई अधिक राम्रो) तर धेरै मानिसहरू लागि यो आनन्द विवाह गर्न यस्तो महिला) र. दुर्भाग्यवश, कुनै हिंड्न बाटो मा आफ्नो विवाह, तर म ब्याज संग पालन को विकास आफ्नो सम्बन्ध). तर, तपाईंलाई थाहा छ, एक परिवार निर्माण गर्न - एक सानो प्रेम फिलिपिनो अन्तर्गत परिवार. यो महत्त्वपूर्ण छ गर्न आपसी आदर पाउन, समझ गर्न, ध्यान दिन र समर्थन छ । कि के म इमानदारीसाथ इच्छा र लिसा, र अधिक.).
निर्देशिका वेबसाइटहरु को समर्पित गर्न फिलिपिन्समा
प्राप्त गर्न लागि गम्भीर सम्बन्ध मित्रता अनलाइन भिडियो च्याट कामुक सबै भन्दा राम्रो भिडियो डेटिङ सेक्स डेटिङ बिना दर्ता भिडियो संचार परिचय भिडियो डेटिङ विज्ञापन डेटिङ वर्ष पुरानो भिडियो च्याट संग बालिका बिना दर्ता